Strawberry Ice chikadzi | MyWeedSeeds.com
Iyo Strawberry Ice feminized mbanje dzakasiyana siyana inoyambuka ine simba kwazvo chiratidzo ine yakasarudzika sativa kuburitsa chirimwa chinotongwa nesativa asi chakabatsirwa nekubata kwechiratidzo chechiratidzo. Iye anotumbuka mangwanani uye yake indica genetics inopa zvinoshamisa zvinoshamisa gohwo. Feminized Strawberry Ice chirimwa chiri nyore-kukura chinokurudzirwa kune varimi vadiki, asi vanodiwa nevanozivawo. Anozokura achifara mumba, panze, kana mu greenhouse. Kunze, anokura akareba asi kureba kwake kunogona kudzorwa mukati meimba. Anogadzira matavi mazhinji akazara nemafuta, akasimba, makristasi akapfuma eTHC uye resin. Yake inoshamisa yepakati cola (yepamusoro bud) inoratidzika kunge isina chando, ichiisa iyo "Ice" muzita rake. Strawberry Ice inowana iyo "Strawberry," zita zvakare. Iye anozadza nzvimbo yake inokura neinotapira, ine muchero sitirobheri hwema kana maruva ake (mabukira) aonekwa. Utsi hwake hune sitirobhu inotapira yeswiti. Yake yepamusoro ichakupa inofadza, inosimudzirwa cerebral state kubva kubva pakati-yakasimba THC.